နိဒါန်း: One-လမ်း clutch Self-clutch ၏ function ကိုအောင်မြင်ရန်တစ်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုဒါမှမဟုတ်တက်ကြွသို့မဟုတ်မောင်းနှင်အစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်ဦးတည်ချက်ကို အသုံးပြု. လြှပျစစျ drive ကို၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆက်သွယ်မှုပုံစံသို့ခွဲခြား: key ကိုဆက်သွယ်မှု, မူလီဆက်သွယ်မှု, စက်သီးဆက်သွယ်မှု, ကွင်းဆက်ဘီးဆက်သွယ်မှု, etc .. ၎င်း၏အဓိက function ကိုပြောင်းပြန်, တိကျ positioning ကို, torque ဂီယာသို့မဟုတ် torque ဖြတ်တောက်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏လည်း backstop သို့မဟုတ်တလမ်းဖြစ်စေသောစပါးကိုခေါ် ...
one-way clutch Self-clutch ၏ function ကိုအောင်မြင်ရန်တစ်စက်မှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုဒါမှမဟုတ်တက်ကြွသို့မဟုတ်မောင်းနှင်အစိတ်အပိုင်းများလည်ပတ်ဦးတည်ချက်ကို အသုံးပြု. လြှပျစစျ drive ကို၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆက်သွယ်မှုပုံစံသို့ခွဲခြား: key ကိုဆက်သွယ်မှု, မူလီဆက်သွယ်မှု, စက်သီးဆက်သွယ်မှု, ကွင်းဆက်ဘီးဆက်သွယ်မှု, etc .. ၎င်း၏အဓိက function ကိုပြောင်းပြန်, တိကျ positioning ကို, torque ဂီယာသို့မဟုတ် torque ဖြတ်တောက်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏လည်း backstop သို့မဟုတ်တလမ်းဝက်ဝံကိုခေါ်။
လျှောက်လွှာ: အလိုအလျောက်အော်တိုဂီယာ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်လျှပ်စစ်က start, စက်ကိရိယာများ, ထုပ်ပိုးစက်ယန္တရား, ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း, အလင်းစက်ယန္တရားများနှင့်အခြားစက်မှုဂီယာ။
ယခင်: Track ကြိတ်စက်
ရေးဆွဲဖလားအပ်ကြိတ်စက်ဝက်ဝံ Caged အမျိုးအစား (Metric စီးရီး) ဟောင်ကောင် HKS
အပြည့်အဝအဖြည့်အမျိုးအစား (Metric စီးရီး) F ကို FH
Caged type ကို (လက်မစီးရီး) SCE SCH
အပြည့်အဝအဖြည့်အမျိုးအစား (လက်မစီးရီး) SN CSN
B က BH
M က MH
အမျိုးမျိုးသော clutch ရေးဆွဲခွက်ကို type ကို HF HFL
Sprag type ကိုတလမ်းတည်းဖြင့်ဒဏ်လက်မှ LHQ LHQG
ချိတ်ဆက်ခြင်းလှံတံ၏ Crank ပင်များအတွက်အပ် Roll နှင့်ကေ့ Assembbly KZK ku
ဆေးထိုးအပ်ကြိတ်စက်ဝက်ဝံ နံရိုးတစ်ခုတည်းအတန်းနှင့်အတူ NK NKS RNA49 RMA48
cylindrical ကြိတ်စက် Berings NU, NJ တစည, N ကိုအဲန်အက်ဖ်
Stopes groove နှင့်အတူ cylindrical ကြိတ်စက် Berings SL0450 ... X ကို, SL04 ... X ကို
ဆေးထိုးအပ်ကြိတ်စက် DW X ကို Lw
PDw X ကို Lw
ထမ်းဘိုးကိုထမ်းအမျိုးအစား Track ကြိတ်စက် နံရိုး caged အမျိုးအစားနှင့်အတူ RSTO
လုံးအမျိုးအစား Track ကြိတ်စက် လှောင်အိမ်အမျိုးအစား KR KRE KR..PP KRE..PP KRV KRVE
အပြည့်အဝအဖြည့်အမျိုးအစား KRV..PP KRVE..PP NUKR NUKRE
ပေါင်းချုပ် Radia ဝက်ဝံထိုး ဆေးထိုးအပ် roller-ဘောလုံးကို NJA 59
ဆေးထိုးအပ် roller-ယုံကြည်မှု cylindrical roller NKXR
အတွင်းစိတ် Ring ကို မှာ IR
ထိုးဝက်ဝံ Trust မှဆေးထိုးအပ်လိမ့်တုံးများနှင့်လှောင်အိမ်ပရိသ AXK
thrust cylindrical roller နဲ့လှောင်အိမ်ပရိသ K811
thrust အဝတ်လျှော် AS
Center ကအဝတ်လျှော် ZS
မော်တော်ကားဝက်ဝံ K သည် KK KS KKS KNL ဟောင်ကောင်ကယ် F ကို FH NK NKI RNA NA RNAV NAV နှင့်ပိုပြီး။
Rdial အပ်နှင့်ကေ့ Assmbly K သည် / KS
ဖလား roller clutch စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီး
ဟွန်ဒါအလုပ်သမားများကြီးကြပ် Sprag clutch
Sprag clutch ဝက်ဝံ
Sprag ဝိုင်းပြီးလျှင် clutch